धेरै समय पछी दमकमा आएर अशोकले आफ्ना साथीहरु देख्दा स्टेजमै रोए, अशोकलाइ हेर्दै टंक भाबुक हुदा माहोल यस्तो बन्यो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
February 2, 2021 AdminLeaveaComment on धेरै समय पछी दमकमा आएर अशोकले आफ्ना साथीहरु देख्दा स्टेजमै रोए, अशोकलाइ हेर्दै टंक भाबुक हुदा माहोल यस्तो बन्यो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
अशोकको नाममा धेरै बिबादास्पद कुराहरु आए गायक तथा संगीतकार टंक बुढाथोकीलाई पनि धेरैले गलत भने तर उनले सबै हिसाब सहित सम्पुर्ण कुराको एक एक रिपोर्ट देखाए र उनी सबैको मनमा सबैको ढुक्ढुकी बनेर बसेका छन । उनले आफ्नो भिट्टा बेचेर भए पनि म अशोकको घर बनाउछु भनेर घर बनाउन लागि परेर अन्तत सबैको सरसहयोगले गर्दा घर बनिएको छ ।
टंक बुढाथोकी र अशोक दर्जी अहिले झापा दमकमा कोरना पछाडी कार्यक्रमको लागि आएका थिए । टंक र अशोकलाई हेर्न रातभरी मानिसहरु पर्खिएर बसेका थिए । थप भिडियो यहाँ हेर्नुहोस्ः